ဘာကြောင့်မင်းရဲ့ PR သူငယ်ချင်းမင်းကိုဘာကြောင့်ပျက်ကွက်နေတာလဲ | Martech Zone
သောကြာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 23, 2011 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါအခါအားလျော်စွာတွစ်တာဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုကိုတန်ဖိုးထားလေးစားသော်လည်းတစ်ချိန်တည်းတွင်တစ်ပြိုင်နက်တွင်ဤနေရာတွင်စကားပြောဆိုမှုကိုမျှဝေရန်နှင့် ထပ်မံ၍ ဆွေးနွေးရန်လုံလောက်သည်။ ဒီကနေ့ငါပေးနေတဲ့ဥပမာက Dittoe PR နဲ့အတူသူတို့ရဲ့အသစ်အဆန်းကိုကြေငြာဖို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကနေစခဲ့တယ် က်ဘ်ဆိုက်.
PRDude ... တစ် ဦး Self- ကွှေးကျွောခဲ့ နောက်ခံလူ အမည်ဝှက်ဖြင့်ဖုံးကွယ်ထားသောပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်း၏ (ကြီးသောလူမှုရေးမဟာဗျူဟာ) သည် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကသူ့ရူပါရုံကိုမကိုက်ညီဘာလို့လဲဆိုတော့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အတွက်အသုံးပြုသင့်သည် သတင်း။ ငါမင်းကိုစကားပြောခွင့်ပေးလိမ့်မယ်။
အမြီးအမောက်ကငါတို့နှင့်အလွန်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် Dittoe PR သူတို့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများစွာအပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးရှာဖွေမှုနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာထိတွေ့မှုမဟာဗျူဟာဖြင့်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့်ထူးခြားသောရလဒ်များရရှိခဲ့သည် ဤအထူးသဖြင့်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအလုံးစုံသောမဟာဗျူဟာတွင်လူအများအားဆက်သွယ်ခြင်းသည်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
PRDude ကဲ့သို့သောဟောင်းနွမ်းကျောင်း PR စနစ်များသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ မြေစာရင်းစာမျက်နှာမဟာဗျူဟာများ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ အသိအမြင်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှုတို့ကိုနားမလည်သောကြောင့်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်။ မကြာသေးမီကငါတို့မြို့ရှိအကြီးဆုံး PR ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းပြောင်းလဲနေပြီးသူတို့ဆက်မလုပ်နိုင်တော့ပါ ငါဒါ PRDude ကားအဘယ်သို့ ခုခံကာကွယ်.
trolling ကြားမှဤအကြောင်းတွစ်တာရေးသားခြင်းအားဖြင့် - PRDude သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်သည်အောင်မြင်ကြောင်းသက်သေသာဓကများပေးခဲ့သည်။ သူဟာဒီသတင်းကို Google News မှာနေရာအနှံ့မှာတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူအသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ကောင်းတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ PR ဖြန့်ဖြူးရေးရည်မှန်းချက်မှာကျွန်ုပ်တို့အရင်ကမရှိဖူးသည့်ပရိသတ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ (စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကငါတို့ဒေသတွင်းဖြန့်ဖြူးမှုသည်အချို့သော site များ၌တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ပျံ့နှံ့သွားပုံရသည်။ ) ကျွန်ုပ်တို့မှတင်ပို့ချက်များစွာနှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ဖော်ပြချက်များစွာရရှိသည်။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ “ သတင်း” ကိုရေးသားရန်သက်သက်မျှသာမဟုတ်ပါ။ PR စနစ်သည်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်၎င်း၏ PR ပညာရှင်အချို့ကိုချန်ထားခဲ့သည်။ စားသုံးသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှတစ်ဆင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေနေကြသောကြောင့်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေခြင်းရှိနေရန်လိုအပ်သည်။ စားသုံးသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်လူမှုရေးအရပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသဖြင့်လူမှုမဟာဗျူဟာရှိရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်များစွာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်မီဒီယာအရင်းအမြစ်များသည်သတင်းဖြန့်ဖြူးရေး ၀ န်ဆောင်မှုများအပေါ်မှီခိုနေရပြီး၎င်းတို့ရှာဖွေနေသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေနိုင်ကြသည်။
A ကောင်းစွာ - optimized သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ကြီးစွာသောဖြန့်ဖြူးနှင့်အတူသင်၏စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်မြင့်မားသောအခွင့်အာဏာများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဆိုဒ်များကနေ backlinks ပေးလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များထံမှသတင်းထုတ်ပြန်ချက်များအပေါ်တွင်အာရုံစူးစိုက်မှုများစွာတွေ့မြင်ရပြီးသူတို့၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တိုးတက်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
ငါကအတူအလုပ်လုပ်ရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ် တိုးတက်သောပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးကုမ္ပဏီ နယူးယောက်တိုင်းမ်စ်၊ Mac ယဉ်ကျေးမှု၊ Wired မဂ္ဂဇင်း၊ iMedia Connection၊ VentureBeat, Mashable စသည့်ဆောင်းပါးများအပါအ ၀ င်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များသည်လုပ်ငန်း၌အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းများကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သည်။ ... သူတို့ရဲ့အမည်များနှင့်၎င်းတို့၏ကုမ္ပဏီတခုကိုအွန်လိုင်းမျှဝေဖို့လုံလောက်တဲ့သတ္တိ။
ဒါကြောင့် ... PRDude သည်ကျွန်ုပ်နှင့်သဘောတူမည်မဟုတ်ပါ (ယခုသူသည်လည်းကျွန်ုပ်၏နောက်လိုက်အတုများရှိသည်ဟုအထက်တွင်စွပ်စွဲခဲ့သည်) ဒါကောင်းပါတယ်၊ ငါတကယ်ဂရုမစိုက်ပါဘူး သူသည်ကျွန်ုပ်၏ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နေသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏ထိရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သဲလွန်စမရှိပါ။ သူကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းနေတဲ့အချိန်မှာငါတို့ဖောက်သည်တွေအတွက်ရလဒ်တွေရလာပြီးသူတို့လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်လာတယ်။ တစ်နေ့မှာသူဟာသူ့လက်နှိပ်စက်ကိုအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်နိုင်ပြီးအွန်လိုင်းအချင်းချင်းဆက်သွယ်မှုဘယ်လိုတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတာကိုတကယ်ကြည့်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။
Tags: prPR ကုမ္ပဏီprdudeစာနယ်ဇင်းဖြန့်ချိပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး
ဒီဇင်ဘာ 28, 2011 မှာ 10: 30 AM
ဒီကောင်လေး ဆက်ပြီး ပညာသင်ကြားနေတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲလို့ တွေးမိတယ်။ ပရော်ဖက်ဆာများသည် "စာနယ်ဇင်း" ထုတ်ဝေမှုသဘောတရားကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားနေပြီး၎င်းအား "မီဒီယာ" ထုတ်ဝေမှုဟုခေါ်ဆိုရခြင်းဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Doug သည်သင်ဖော်ပြခဲ့သည်အရာအားလုံးကိုပြီးမြောက်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
29:2011 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 3, 33 တွင်
မားကတ်တင်းအတွက် နည်းဗျူဟာတစ်ခုအနေနဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို အသုံးပြုတာကို ဆန့်ကျင်တာမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော် ထောက်ပြခဲ့တာက ထုတ်ဝေမှုရဲ့ အကြောင်းအရာပါ။ သတင်းစာ (သို့) သတင်းထုတ်လုပ်သူအတွက် အယ်ဒီတာတစ်ဦးကို နောက်ဆုံးအကြိမ် ခန့်အပ်ခြင်းမှာ မည်သည့်အချိန်က ဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့တောင်းဆိုသည့် ပထမဆုံးအချက်မှာ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် ဝိုင်ယာကြိုးပေါ်တွင် ဤသဘောသဘာဝ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ပေးပို့သောအခါ၊ ၎င်းသည် တည်းဖြတ်သူများ၏ ဝင်စာများထံသို့ ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ အဲဒါကြောင့် တည်းဖြတ်သူတွေက အမှိုက်ပို့တဲ့ PR သူတွေကို မုန်းတီးကြတာပါ၊ တကယ်တမ်းတော့ သတင်းမထိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာအတွက် ဒီဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေတဲ့ စျေးကွက်ရှာဖွေသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပဲပြောနေတာ။ အဲဒါက ခေတ်နောက်ကျနေပြီလို့ တွေးရင် ငါ့ကို ကျောင်းဟောင်းလို့ ခေါ်ပေမယ့် ဦးနှောက်တစ်ဝက်လောက်ရှိတဲ့ ဂျာနယ်လစ်တွေဆီ သတင်းပို့တဲ့အခါ အကူအညီထက် တံဆိပ်တစ်ခုကို ပိုနာကျင်စေတယ် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအရာကို သင်အလိုရှိသမျှ ဆွေးနွေးနိုင်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများမှ လာပါသည်။ ကျွန်ုပ်ပေးပို့သော အကြောင်းအရာများကို လေးစားပြီး ၎င်းသည် လိုအပ်မည့်အရာဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရန် ကြိုးစားပါသည်။ ကမ္ဘာကြီးကို အီးမေးလ်ပို့တာမဟုတ်ဘဲ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ခြင်းအကြောင်းပါ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ်!
29:2011 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 6, 14 တွင်
PR Dude – ဒါဟာ "အမှိုက်" သို့မဟုတ် "သတင်းမထိုက်" ဆိုတာကို ကျွန်တော် အခုထိ တွေးနေတုန်းပါပဲ။ ဒီပို့စ်မှာ ထေ့ငေါ့စရာအကြောင်းတွေပြောခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် တကယ်ရှိတာတွေရှိတယ်။ အပြင်တွင် 'စျေးကွက်ရှာဖွေသူနှင့် လူထုဆက်ဆံရေး' အမျိုးအစားအချို့ရှိပုံရသည်။ ဟိ DK New Media DittoePR နှင့် ဆက်ဆံရေးသည် သတင်းဖြစ်သည် – တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသော ရိုးရာ PR ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး မီဒီယာအေဂျင်စီအသစ်တစ်ခုနှင့် လုပ်ဆောင်နေသည်။ ပြီးတော့… လူထုဆက်ဆံရေးမှာ မယုံနိုင်လောက်အောင်တန်ဖိုးရှိတဲ့ မီဒီယာအေဂျင်စီအသစ်တစ်ခုပါ။
သတင်းမထိုက်ဘူးလို့ မထင်တဲ့အတွက် မဟုတ်ဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အဆိုပါသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် တုံ့ပြန်မှုသည် အလွန်အပြုသဘောဆောင်သော တုံ့ပြန်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ တကယ်တော့၊ မင်းရဲ့ တစ်ခုတည်းသော လူထုဝေဖန်မှုကို ငါတို့တွေ့နိုင်တယ်။ တစ်ဖန်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့သော ကြီးကျယ်သော နေရာချထားမှုဖြင့် အကဲဖြတ်ခြင်း - ၎င်းမှာ အခြားသူများ၏ တန်ဖိုးထားမှုကို ရရှိခဲ့သည့် သတင်းဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် စကားဝိုင်းမှာ မင်းရဲ့ ပြတ်သားတဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို ငါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
29:2011 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 6, 34 တွင်
ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုထင်ပါတယ်။ မီဒီယာနေရာချထားမှု က ဘာကိုဆိုလိုမှန်းတော့ မသိဘူး။ ဝိုင်ယာကြိုးပေါ်တွင် မည်သည့်အရာမဆို ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုကို စာရင်းသွင်းထားသည့် မီဒီယာများမှ ကောက်ယူရရှိသော်လည်း သတင်းထောက်တစ်ဦးသည် ဤသတင်းအမျိုးအစားကို ဖုံးကွယ်ရန် လုပ်ဆောင်နေသည့်အရာများကို ရပ်တန့်မည်ဟု အမှန်တကယ်ဆိုလိုပါသလား။ 1996 ၊ 2011 မှာ မဟုတ်ဘူး ။ Indy Star သို့မဟုတ် Adweek သို့မဟုတ် Ad Age ကဲ့သို့သော လေးစားဖွယ်ကောင်းသော ပြင်ပမီဒီယာများ သို့မဟုတ် Adweek သို့မဟုတ် Ad Age ကဲ့သို့သော အရောင်းအ၀ယ်များက ယင်းကို ဒုတိယပုံစံပေးမည်ဆိုပါက ကျွန်ုပ် အံ့အားသင့်မိပါသည်။ မဟာမိတ် သို့မဟုတ် မိတ်ဖက်အဖြစ် လှည့်ပတ်လျှင် သတင်းတန်ဖိုးကို ကျွန်ုပ်မြင်သည်။ ပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုသည် သတင်းစာပညာစံနှုန်းများအတွက် မလုံလောက်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ပါသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ နည်းဗျူဟာပိုင်းကို ဝေဖန်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ အကြောင်းအရာသက်သက်ပါ။ နောက်တဖန်၊ ငါသည်သင်တို့၏ပို့စ်အတွက်အခြားလူကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေသူနှင့် PR သည် သင်သိသည့်အတိုင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခဲ့သည်။ စော်ကားရန်မဟုတ်သော်လည်း စျေးကွက်ရှာဖွေသူအဖြစ် ရည်ညွှန်းခြင်းကို မကြိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များနှင့် အမှတ်တံဆိပ်များအတွက် အရေးကြီးသော်လည်း ကွဲပြားသောရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုကို နောက်ဆုံးတွင် တူညီသောပန်းတိုင်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ PR လူများသည် တည်းဖြတ်သူများ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ဘလော့ဂါများ စသည်တို့နှင့် တည်ဆောက်ထားသော ဆက်ဆံရေးအပေါ်တွင် မှီခိုအားထားရပြီး ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ဝင်စာပုံးများတွင် မသက်ဆိုင်သော သတင်းများ အများအပြားကို ရရှိကြောင်း ၎င်းတို့ပြောပြသည်ကို ကြားလိုက်ရခြင်းသည် စိတ်တိုစရာဖြစ်သည်။ သင်သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနေရာရှိ ဘလော့ဂါတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သင့်ဘလော့ဂ်တွင် ဒီဇိုင်းပြန်လည်ရေးဆွဲထားသော ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့သော သုံးစွဲသူတစ်ဦးအကြောင်း ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို သင်လုပ်ဆောင်နိုင်မလား။ ၎င်း၏ဆိုက်ကို ပြန်လည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသော ဝဘ်ဆိုက်တိုင်းက ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုကို စတင်ပေးပို့ပါက မည်သည့်အကြောင်းအရာများကို ရေးလိုပါမည်နည်း။ ရေးဖို့ အရေးကြီးသလို ဘယ်ဟာက အရေးကြီးလဲ ဆိုတာကို ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ။ ငါရူးသွပ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်မရှိတာရှိရင် ငါ့ကိုပြောပြပါ။ အားလပ်ရက်တွေဆိုတော့ အရက်သောက်ဖို့ ရက်တွေ အများကြီးရှိပြီ။ ပျော်ရွှင်စရာ။ 🙂
29:2011 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 6, 39 တွင်
PR Dude- တုံ့ပြန်မှုမှာ ဘာအကြောင်းရေးရမလဲ၊ ဘာအကြောင်းမရေးရဘူးဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ပုံပါပဲ။ တုံ့ပြန်မှုကောင်းလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် နည်းဗျူဟာကို ဆက်လက်အသုံးပြုနေပါသည်။ တုံ့ပြန်မှု မကောင်းပါက အသစ်တစ်ခု ရှာတွေ့ပါမည်။ ပျော်ရွှင်စရာ အားလပ်ရက်များ ကိုလည်း သင့်အား ပေးဆောင်ပါ။
29:2011 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 6, 51 တွင်
ကျေးဇူးပါ။ ငါမင်းကိုအကောင်းဆုံးဆုတောင်းတယ်။ မင်း Big Apple မှာရှိတဲ့အခါ ငါ့ကို မင်းကို အချိုရည်ဝယ်ပေးမယ်။ အချေအတင် ဆွေးနွေးစရာ မလိုဘဲ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမိုက်စားပါပဲ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ်!
ဇန်နဝါရီလ3ရက် 2012 ခုနှစ် ညနေ 1 နာရီ 03 မိနစ်
စကားရည်လုပွဲအတွက် အလွန်အေးမြသော နိမိတ်ဖြစ်သည်။ အပြင်မှာ "အမိုက်စား" တွေများလွန်းတာကို ကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖွင့်ဖို့အတွက် ထုတ်ဝေမှုတစ်ခုက အဆင်ပြေတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ PR ကောင်းကောင်းဆိုတာ ကျွန်တော်သိထားတဲ့အရာပါပဲ - ကုမ္ပဏီ၊ ပရိသတ်၊ ဆိုင်ခွဲတွေက ထွက်ရှိလာတဲ့ အရင်းအမြစ်ပေါ်မူတည်ပါတယ်။ စသည်တို့ကို Douglas လွတ်မြောက်ရေးတွင် ကျွန်ုပ်သည် လုံးဝနောက်ကွယ်တွင် ရှိနေသော်လည်း ထုတ်ဝေမှုများ အလွန်အကျွံ ဂရုစိုက်သင့်သည်ကို သဘောတူပါသည်။ တစ်ချို့က အရာအားလုံးကို မှုန်ဝါးဝါးပစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ တည်ရှိမှုကို တန်ဖိုးထားတတ်ကြတယ်။
ဇန်နဝါရီလ5ရက် 2012 ခုနှစ် ညနေ 1 နာရီ 49 မိနစ်
အငြင်းအခုန်ကြီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတို့၊ လေးစားသဘောမတူနိုင်တဲ့ လူနှစ်ယောက်ကို တွေ့ရတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် +1
ဇန်နဝါရီလ 13 ရက် 2012 ခုနှစ် ညနေ6နာရီ 00 မိနစ်
ကျေးဇူးပါ။ Doug ကို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မသိဘူး၊ ဒါပေမယ့် သူက သူ့လုပ်ငန်းမှာ လေးစားရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဆိုတာ သိပါတယ်၊ ဘယ်သူက ဘယ်ကလာလာ အချင်းချင်း လေးလေးစားစား ဆက်ဆံသင့်တယ်။ အထူးသဖြင့် သမ္မတလောင်းများ သို့မဟုတ် ရွေးကောက်ခံရာထူးအတွက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူတိုင်းကို ယဉ်ကျေးသောပုံစံဖြင့် ငြင်းခုန်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ ပဏာမအဆင့်များ အရှိန်တက်လာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်တို့သည် အဆိုးမြင်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ တိုက်ခိုက်မှုများကို ပိုမိုတွေ့မြင်ရမည်ဟု လောင်းကြေးထပ်ပါသည်။